Ogaden News Agency (ONA) – Trump oo Khafiifinaya Cunaqabataynta Turkiga Hadii Andrew Brunson Lasiidaayo.
Trump oo Khafiifinaya Cunaqabataynta Turkiga Hadii Andrew Brunson Lasiidaayo.
Posted by ONA Admin	/ August 24, 2018
Trump ayaa sheegtay in uu khafiifin doono cadaadiska uu saartay dhaqaalaha wadanka Turkiga hadii ay dowlada Tayyib Erdogan ay xabsiga kasii deyso Baadari ku jira xabsiga Turkiga 21-kii bilood ee lasoo dhaafay.
Baadarigan u dhashay dalka Maraykanka Andrew Brunson, ayaa muddo 20 sano ah degenaa wadanka Turkiga, waxayna xukuumada Turkiga ku eedaysay inuu ku lug lahaa inqilaabkii dhicisoobay ee sanadkii 2016 ka dhacay dalka Turkiga.
Maxkamada Turkiga ayaa marar badan diiday codsiga siideynta wadaadkan oo hada ku jira xabsi guri. Trump ayaa dhawaan amray in canshuur dheeraad ah lagu soo rogo ganacsiga Turkiga ee loo iib geeyo wadanka Maraykanka, si cadaadis loogu saaro Turkiga siideynta wadaadkaasi masiixiga ah.
Go’aanka Trump ayaa culeys weyn ku keenay qiimaha lacagta Turkiga ee lira oo si weyn hoos ugu dhacay todobaadyadii lasoo dhaafay, arrintan ayaa kusoo beegmatay xili uu Madaxweynaha Turkiga Erdogan uu dadaal ugu jiray inuu dib usoo nooleeyo dhaqaalaha dalkaasi oo uu hoos u dhac ku jiray bilihii lasoo dhaafay.